Ungasusa njani i-Bleach Stain: 5 Ukulungiswa okulula - Iingubo Zokuhlamba Iimpahla
Ungasusa njani i-Bleach Stain: 5 Ukulungiswa okulula
Fumana iingcebiso ezikhawulezayo nezilula zokususa amabala ebhlitshi kwiingubo ngeendlela ezimbalwa ezilula. Fumana indlela yokulungisa amabala e-bleach kwiingubo ezimhlophe kunye nemibala. Funda malunga nokuba ibala le-bleach ayisiyiyo kwaphela ibala.
Ungasusa njani i-Bleach Stain: Izixhobo
I-Bleach ikwiimveliso ezininzi ezahlukeneyo, ke ukufumana ibala le-bleach kwihempe yakho oyithandayo akunzima. Kodwa iblitshi ayonakalisi kwaphela. Isusa ngokusisigxina umbala wedayi. Ke, into oyibonayo kwihempe yakho okanye ibhlukhwe yilahleko yedayi. Ke ngoko, iindlela eziqhelekileyo zokucoca azisebenzi njenge-bleach misaps. Ngaphambi kokuba ungene kwimowudi yokuhlaselwa kwibala le-bleach, kufuneka ubambe izixhobo ezimbalwa.
Isepha yesitya (ngokukhethekileyo i-Dawn eluhlaza okwesibhakabhaka)
Iindlela zokususa ii-Ink Stain kwiiDryers
Ungayenza njani mhlophe iPlastikhi eMthubi: Iindlela ezilula nezikhuselekileyo
Uwasusa njani amabala amadala ekuphepheni
Ukungathathi cala kwiBleach ngeSoda yokubhaka
Ngaphambi kokuzama indlela yokulungisa i-bleach kwiingubo zakho, kubalulekile ukunciphisa ibala le-bleach. Ke ngoko, ufuna ukucoca indawo ukususa iblitshi engaphezulu. Emva kokususa iblitshi:
Hlanganisa i-baking soda kunye namanzi ukwenza unamathisele.
Beka umxube kwibala.
Vumela unobumba ukuba lome.
Indlela yokulungisa ii-Bleach Stains ezivela kwiingubo ezimhlophe
Esikhundleni sokudyobha iimpahla ezimhlophe, iblitshi inokushiya intsalela emthubi.Ukususa eli banga limthubiilula kakhulu ngeviniga emhlophe.
Gcoba ilaphu kangangemizuzu eliqela.
ungathini emntwini xa kusweleke inja yakhe
Beka iviniga emhlophe echanekileyo kumabala atyheli.
Vumela ukuba ihlale imizuzu emi-5.
Yipule indawo ngamanzi abandayo.
Jonga ukuba intsalela ihambile.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba i-bleach kunye neviniga emhlophe akufuneki ixube. Qiniseka ukuba i-bleach ihlanjululwe kakuhle kwilaphu ngaphambi kokufaka iviniga emhlophe.
Indlela yokuCwangcisa iBlueach Stains NgeSep Dish
Unokusebenza ukususa amabala e-bleach kunye nentsalela kwimpahla emhlophe ngesepha yesitya. Uya kudinga ukuKhanya kunye nelaphu.
Yongeza ii-squirts ezi-3-4 zentsasa kwindebe yamanzi.
Hlanganisa zombini kakuhle.
Dipha ilaphu kulo mxube.
Yisebenze ngaphezulu kwebala le-bleach ukuqala ngaphandle ngaphakathi.
Hlanganisa kwaye uphinde kwakhona njengoko kuyimfuneko de kube yonke intsalela ihambile.
Sebenzisa ukuRubber Alcohol for Bleach Stain kwiZambatho ezimnyama
Xa ufumana iblitshi kwihempe yakho oyithandayo okanye kwijini, landela le ndlela yokuthomalalisa ukuba ayikhange ihambe ngokuhlamba. Emva koko unokuzama le hackke kwiindawo ezincinci ezinamabala.
Dipha iswabi yomqhaphu ngokurabha utywala.
Hlikihla i-cotton swab ejikeleze ibala le-bleach, ukutsala umbala kwiindawo ezijikelezileyo uye kwindawo emhlophe.
Qhubeka nale nto de ibe idayi igqithiselwe ngokupheleleyo kwindawo ene-bleached.
Vumela impahla ukuba yome umoya.
Ungaqaphela ukuba indawo ene-bleached isakhaphukhaphu kancinci kunommandla ojikelezileyo. Ukuba kunjalo, sebenzisa idayi yelaphu ukulungisa oku.
Indlela yokususa i-Bleach Stain ngeDayi yengubo
Ukuba indlela yotywala ayisebenzi okanye unebala elikhulu, kwaye ilaphu alonakalanga (iblitshi inokunyibilikisa izinto ezithile), emva koko unokuzama ukudaya ingubo. Le ndlela ihamba ngendlela yokwenza idayi yengubo epheleleyo.
Fumana idayi yelinen ehambelana nombala wengubo yakho.
Sebenzisa isikhuseli sombala ngokulandela imiyalelo. Sukutsiba eli nyathelo, kuba izakunceda idayi ithathe impahla yakho.
Phinda wenze into emva kwemiyalelo ekwiphakheji yedayi yakho.
Ngelixa uninzi lunendlela yomatshini wokuhlamba impahla, ukuthambisa impahla ngebhakethi nako kusebenza kakuhle.
Indlela yokufumana iBleach Stains ngaphandle kweengubo kunye neMarker Fabric
Ukuba ayisiyiyo yonke into malunga nokudaya loo nto okanye unento enemibala emininzi enebala le-bleach, ipeni yokumakisha yelaphu inokugcwalisa iimfuno zakho.
Fumana umakishi welaphu kufutshane nombala wendawo ene-bleached ngokunokwenzeka.
Sebenzisa usiba ukufakela umbala kwindawo ene-bleached.
Landela umkhombandlela kwiphakheji yokuhlamba.
Ukuba umakishi welaphu akafumaneki, ummakishi osisigxina unokusebenza nakwipiniki. Kodwa oku akubambeleli kwindawo yokuhlamba kunye nokumakisha.
ungajongana njani namalungu osapho angakuhoyi
Ungakuphepha njani ukufumana i-Bleach Stain kwiingubo
Amabala eBleach ayenzeka. Yinyani yobomi. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iingcebiso ezimbalwa ukunqanda ukufumana amabala e-bleach kwimpahla oyithandayo.
Nxiba impahla ekhanyayo xa ucoca okanye uhlamba iblitshi.
Qinisekisa ukuba iibhasikiti zakho zokuhlamba iimpahla zikude ne-washer yakho ukunqanda ukuchitheka, kwaye uyalandelaamanyathelo okhuseleko xa usebenzisa iblitshikwindawo yokuhlamba iimpahla.
Nxiba iiglavu xa uphatha iblitshi ukunqanda amabala e-bleach kwiikhofu.
Njalo sebenzisa inani elinconywayo leblitshi kumhlophe.
Iindlela zokuLungisa iBleach kwimpahla
Xa kuziwa ekufumaneni amabala eblitshi kwimpahla yakho, kukho iindlela zokuyilungisa. Kwiimpahla ezimnyama, ungazama utywala kodwa unokufuna ukubhenela kwidayye. Kwimpahla emhlophe, konke kukususa intsalela ye-bleach. Ngexesha elizayo xa kufikwa kumabala amhlophe, unayo le!
Party Izimemo Ikhalori Ithintelwe Diet Ubuxoki Ukuba Likhoboka Cat Health And Health Problems Used Cars
Umgangatho Ophantsi Ne Vines
Zeziphi iiMveliso zeNgxowa zoMyili eziXabiso kakhulu?
Uhlala njani eCambodia
Yintoni iPyre yoMngcwabo? Imbali kunye neNyaniso
13 Imibongo yothando Long Relationship
Ungabiza njani umntu uye ngqo kwi-voicemail
Ukucoca okungcono kwesikhumba esomileyo esiqhelekileyo
izinto zonqulo zasimahla ngeposi 2018
imibuzo ukubuza isoka entsha
ukuba uzothini kumntu ofelwe ngumzali
Ndimthumelela njani i-imeyile umongameli